विष्णु लामिछाने - | Nagarik News - Nepal Republic Media
कमलराज भट्ट/विष्णु लामिछाने
विष्णु लामिछानेका लेखहरु :
बिहिवार रातीबाट नगर सिल गर्ने बिर्तामोड नगरपालिकाले सुचना जारी गरेपछि बिर्तामोड क्षेत्रमा देखिएका बिहीबार बिहानको दृश्य । झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या २७ पुगेको छ।
विष्णु लामिछाने ८ जेष्ठ २०७७ बिहीबार १ मिनेट पाठ
यस्तो छ आदिवासीको जनसंख्याको स्थिति (भिडियो)
२६ औं विश्व आदिवासी दिवस नेपालमा समेत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदै छ। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ तारिखमा मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्षका रुपमा घोषित गरेपछि सोही वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
विष्णु लामिछाने २४ श्रावण २०७६ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
यसरी हुन्छ वैदेशिक रोजगारीमा मानव बेचबिखन (भिडियाे)
राम्रो कामको प्रलोभन वा उज्यालो भविष्य बनाउने र आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने योजना बनाउँदै वैदेशिक रोजगारमा लगिने वा जाने व्यक्तिहरु कुनै न कुनै प्रकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा परिरहेका छन्। महिला कामदारको स्थिति झनै संवेदनशील छ।
विष्णु लामिछाने १४ श्रावण २०७६ मंगलबार ५ मिनेट पाठ
के साँच्चिकै यो देशमा न्याय हराएकै हो त ?
निर्मला हत्या प्रकरणको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, अहिलेसम्म न हत्यारा पत्ता लाग्यो न त निर्मलाका परिवारले न्याय पाए। २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला पर्यो। १० वर्षीया उनको शवमाथि धेरैले राजनीति गरे। सरकार र प्रहरीका विरुद्ध नाराबाजी गरिए। तर, हालसम्म पनि हत्यारा भने पत्ता लागेको छैन।
विष्णु लामिछाने १० श्रावण २०७६ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
बानेश्वर आकासे पुल निर्माणको गति सुस्त (भिडियो)
बानेश्वर चोकमा तपाई जुनसुकै समय पुग्नुस जाम झेल्नै पर्छ। पैदल वा सवारीमा। चारै दिशाबाट जोडिने सडकहरु र कमिला सरि गुड्ने सवारीसाधन सँगै सडक वारपार गर्न कुरिरहेका यात्रुहरु। गन्जागोल अवस्थामा रहेका तारहरु र अव्यवस्थित निर्माण सामाग्रीले गर्दा पैदल यात्रुलाई ओहोर दोहोर गर्न र गाडी चड्नै मुस्किल पर्ने गर्छ।
विष्णु लामिछाने ७ श्रावण २०७६ मंगलबार २ मिनेट पाठ
बूढानीलकण्ठ स्कूलको जग्गा अब के हुन्छ?
अघिल्लोपटक सरकारमा जादा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढानिलकण्ठ जस्तै देशभर २४० वटा गुणस्तरीय बिद्यालय बनाउने हुइया लगाए। तर दोश्रोपटक चुनाव जितेर दोश्रो नीति तथा कार्यक्रम आउदै गर्दा उनै प्रधानमन्त्रिले विद्यालयको नाम नतोकी ७५० रोपनी जग्गा भएको भन्दै सो जग्गा सरकारले उपयोग गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बैशाख २४ गते नीति तथा कार्यक्रमको सवाल जवाफ गर्ने क्रममा नाम नतोकी यस विद्यालयबारे बोलेका थिए। प्रधानमन्त्रीको बोली पछि विद्यालयको जग्गामा आँखा लगाउने पनि बढेका छन्।
विष्णु लामिछाने १२ जेष्ठ २०७६ आइतबार २ मिनेट पाठ
पार्टीले अन्याय गर्‍यो तर जिम्मेवारी छोड्दिनः रन्जित तामाङ
बुधबार बिहान गृह जिल्ला झापामा प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तामाङले सो घोषणा गरेका हुन।
विष्णु लामिछाने ८ जेष्ठ २०७६ बुधबार ३ मिनेट पाठ
प्रदेश तीनका प्रदेश सभा सदस्य केशव स्थापितले कृषिकै माध्यमबाट समृद्धिको बाटोमा जान सकिने बताएका छन्। सामुदायिक कृषिबजारको शनिबार उद्घाटन गर्दै सांसद स्थापितले हाट बजारले जिवन पाठशालाको काम गर्ने भएकाले सबैले पाठ सिक्न सक्ने बताए।
विष्णु लामिछाने २८ वैशाख २०७६ शनिबार १ मिनेट पाठ
बारा र पर्सामा आइतबार आएको हावाहुरीबाट घाइते भएका ७ जनाकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेकाे छ। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जमा उपचार हुन नसकेपछि उनीहरुलाई नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत काठमाडौं ल्याइ शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएकाे हाे।
विष्णु लामिछाने १८ चैत्र २०७५ सोमबार १ मिनेट पाठ
नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा कसले मार्ला बाजी
नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्ष पदका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
विष्णु लामिछाने १३ चैत्र २०७५ बुधबार १ मिनेट पाठ
सिटी लाग्दा कफी निस्कने "कुकर कफी"
निर्बाध गुड्छन् प्रदूषण जाँचमा फेल भएका सवारीसाधन (भिडियाे)
ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि फाुगन मसान्तसम्म १ हजार ४० वटा सवारीसाधन प्रदूषण जाँचमा फेल भएका थिए। प्रदूषण जाँचमा फेल भए पनि ती सवारीसाधन निर्बाध रुपमा राजधानीमा गुडिरहेका छन्। तर महाशाखाले भने सवारी जाँचमा फेल भएका त्यस्ता सवारीसाधानमाथि निगरानीका साथै कारबाही गरेको दाबी गरेको छ।
विष्णु लामिछाने ८ चैत्र २०७५ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
उनलाई म्यानमारमा होटलको कोठाभित्र बस्दा बस्दा दिक्क लागि सकेको थियो। त्यहाँ अरु पनि नेपाली थिए। तर चिनजान नगरौँ भन्थे सबै जना। पैसा पनि थिएन, काम गर्न पनि नमिल्ने कति बस्नु कोठामा? मेनुकालाई दिक्क लागिसकेको थियो। उनलाई अब जता लगे पनि काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिसकेको थियो तर दलालले उनलाई दुवइ लगेर बेच्न लागेका छन् भन्ने थाहा थिएन।
विष्णु लामिछाने २८ माघ २०७५ सोमबार ८ मिनेट पाठ
डा. केसी अनशन तोड्नुहोस् : देउवा
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै २३ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्।
विष्णु लामिछाने १७ माघ २०७५ बिहीबार १ मिनेट पाठ
गत भदौ २६ गते मंगलबार राति एसिड आक्रमणमा परेकी चन्द्रनिगाहपुर ६ की १७ वर्षीया सम्झना दासको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकी १५ वर्षीया सुस्मिता दासको अवस्था भने सामान्य रहेको छ।
विष्णु लामिछाने र दिपेन्द्र रोक्का ८ आश्विन २०७५ सोमबार १ मिनेट पाठ
विष्णु लामिछानेका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्